Allopurinol (အေလိုပျူရီနော) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Allopurinol (အေလိုပျူရီနော)
Allopurinol (အေလိုပျူရီနော) ကဘာလဲ။
Generic Name: Allopurinol (အေလိုပျူရီနော) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Allopurinol ကို မည်သည့် အကြောင်းအရာများအတွက် အသုံးပြုကြပါသလဲ။
Allopurinol ကို ဂေါက်ရောဂါနဲ့ ကျောက်ကပ်မှာ ကျောက်တည်ခြင်းတွေကို ကုသဖို့အတွက် အသုံးပြုကြပါတယ်။ သူ့ကို ကင်ဆာ ဆေးသွင်းကုသခြင်း ခံယူနေတဲ့ လူနာတွေမှာ uric acid ပမာဏ မြင့်တက်ခြင်းကို ကာကွယ်ဖို့အတွက်လည်း အသုံးပြုကြပါတယ်။ ဒီလူနာတွေမှာ ကင်ဆာဆဲလ်တွေကနေ ထုတ်လိုက်တဲ့ uric acid တွေကြောင့် သွေးအတွင်း uric acid ပမာဏ များနေနိုင်ပါတယ်။ Allopurinol ဟာ ကိုယ်ခန္ဓါက ပြုလုပ်လိုက်တဲ့ uric acid ပမာဏကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ Uric acid များခြင်းဟာ ဂေါက်ရောဂါနဲ့ ကျောက်ကပ် ပြဿနာတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
Allopurinol ကို ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်ပါသလဲ။
Allopurinol ကို သောက်ဆေးအဖြစ် တစ်နေ့တစ်ကြိမ် (သို့) ဆရာဝန် ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းသောက်သင့်ပါတယ်။ အစာအိမ် မထိခိုက်စေရန် ဒီဆေးကို အစာစားပြီးချိန်မှာ သောက်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သောက်ရမည့် ဆေးပမာဏဟာ တစ်နေ့ကို 300mg ထက် များတယ်ဆိုရင် နေ့အချိန်မှာ ဒီပမာဏရောက်အောင် ဆေးပမာဏ အနည်းငယ်စီကို အကြိမ်များစွာ သောက်ရနိုင်ပါတယ်။
ဆေးသောက်ပြီးတိုင်း ရေဖန်ခွက်တစ်ခွက် အပြည့်သောက်သုံးရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး တစ်နေ့မှာ အရည်ဖန်ခွက် ရှစ်ခွက်အထိ သောက်သင့်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်ဆရာဝန်က အခြားကျန်းမာရေး ကိစ္စအတွက် အရည်လျှော့သောက်စေမယ်ဆိုရင် သင့်ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။ ဆရာဝန်က ဆီးအတွင်းမှာ uric acid ဘယ်လိုနည်းအောင် လုပ်ရမလဲဆိုတာ ညွှန်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆေးပမာဏဟာ သင့်ကျန်းမာရေး အခြေအနေနဲ့ ကုသမှုကို တုန့်ပြန်မှုပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ Allopurinol ကို အစွမ်းအထက်ဆုံးဖြစ်စေဖို့ နေ့တိုင်း အချိန်မှန်သောက်သင့်ပါတယ်။
ဂေါက်ရောဂါကုသမှုမှာ အာနိသင်ရစေဖို့ ရက်သတ္တပတ်ပေါင်းများစွာ ကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။ သင့်မှာ ကိုယ်ခန္ဓါက uric acid အပိုတွေကို ဖယ်ထုတ်လိုက်စဉ်မှာ ဒီဆေးစသောက်ပြီး လပေါင်းများစွာအကြာမှာ ဂေါက်ရောဂါ ပြန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီဆေးဟာ အနာသက်သာဆေးမဟုတ်ပါဘူး။ ဂေါက်ရောဂါကြောင့်နာကျင်မှုကို သက်သာစေဖို့ ဆရာဝန်ညွှန်းထားတဲ့ဆေးတွေကို (colchicine ၊ ibuprofen ၊ indomethacin) ဆက်လက်သောက်သင့်ပါတယ်။
Allopurinol ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Allopurinol ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Allopurinol ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။
Allopurinol ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Allopurinol ကိုမသောက်သုံးခင်မှာ ဘယ်အချက်အလက်တွေကို သိထားသင့်သလဲ။
allopurinol မသောက်ခင်မှာ အောက်ပါအခြေအနေတွေ ရှိရင် ဆရာဝန်ကို ပြောပြသင့်ပါတယ်။
Allopurinol (သို့) Allopurinol ပါဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ဓါတ်မတည့်ရင်
အခြားဆေးတွေ၊ ဗီတာမင်တွေ၊ ဖြည့်စွက်စာတွေ၊ herbal ထုတ်ကုန်တွေ သောက်နေတာ ရှိရင်၊ အထူးသဖြင့် အောက်ဖေါ်ပြပါဆေးတွေ သောက်နေတာရှိရင် ဆရာဝန်ကို သေချာပြောပြသင့်ပါတယ်။
amoxicillin (Amoxil ၊ Trimox) ၊ ampicillin (Polycillin ၊ Principen) ၊ warfarin (Coumadin) ကဲ့သို့ သွေးကျဲဆေး ၊ cyclophosphamide (Cytoxan) နဲ့ mercaptopurine (Purinethol) ကဲ့သို့ ကင်ဆာဓါတုဆေးကုထုံး ၊ chlorpropamide (Diabinese)၊ ဆီးဆေး ၊ azathioprine (Imuran) and cyclosporine (Neoral, Sandimmune) ကဲ့သို့ ကိုယ်ခံအားချပေးသောဆေး ၊ probenecid (Benemid) နဲ့ sulfinpyrazone (Anturane) ကဲ့သို့ ဂေါက်ရောဂါ ကုသပေးသော အခြားဆေး ၊ tolbutamide (Orinase)။
သင့်ဆရာဝန်က ဆေးပမာဏ ပြောင်းလဲခြင်း (သို့) ဆေးရဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကို စောင့်ကြည့်ခြင်းတွေ ပြုလုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အသည်းရောဂါ၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါရှိရင် ဆရာဝန်ကို ပြောပြပါ။
ဒီဆေးဟာ အိပ်ငိုက်ခြင်းကို ဖြစ်စေတာကြောင့် ဆေးသောက်ထားရင် ကားမောင်းခြင်း (သို့) စက်ကိရိယာတစ်ခုခု အသုံးပြုခြင်းကို မပြုလုပ်သင့်ပါဘူး။
အရက်ကို ဘယ်လိုစိတ်ချရအောင် သောက်မလဲဆိုတာ ဆရာဝန်ကို မေးမြန်းသင့်ပါတယ်။ အရက်ဟာ ဒီဆေးရဲ့ အစွမ်းထက်မှုကို လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။
Allopurinol က ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိနိုင်လဲ။
သင့်မှာ အောက်ပါ ပြင်းထန်တဲ့ လက္ခဏာတွေ ရှိရင် ဆရာဝန်ကို ချက်ခြင်း ခေါ်သင့်ပါတယ်။
ဖျားခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်း၊ အရည်ကြည်ဖုထခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အရေခွံကွာခြင်း၊ အရေပြားနီရဲခြင်း
ပထမ လက္ခဏာကတော့ အရေပြားနီရဲ အကွက်ထလာခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆီးသွားတဲ့အခါ နာကျင်ခြင်း၊ သွေးထွက်ခြင်း
ပျို့ခြင်း၊ အစာအိမ်နာခြင်း၊ ယားယံခြင်း၊ အစာစားချင်စိတ်မရှိခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန် ကျဆင်းခြင်း၊ ဆီးအရောင်ရင့်ခြင်း၊ ဝမ်းမည်းမည်းသွားခြင်း၊ အရေပြား၊ မျက်လုံးဝါခြင်း
ဆီးနည်းခြင်း (သို့) လုံးဝမသွားခြင်း
အဆစ်နာကျင်ခြင်း၊ တုတ်ကွေး လက္ခဏာများ
ပြင်းထန်တဲ့ ထုံကျင်ခြင်း၊ နာကျင်ခြင်း၊ ကြွက်သား အားနည်းခြင်း
အညိုအမဲစွဲခြင်း၊ ပုံမှန်မဟုတ်သော သွေးထွက်ခြင်း (နှာခေါင်း၊ ပါးစပ်၊ မိန်းမကိုယ်၊ စအို) အရေပြားအောက်မှာ အနီရောင် (သို့) ခရမ်းရောင် အစက်အသေးလေးတွေပေါ်ခြင်း
ဘယ်ဆေးဝါးတွေက Allopurinol နဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်သလဲ။
Allopurinol ဟာ သင်အခု လောလောဆယ် သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေ အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေ အားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာ၀ ဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေ အားလုံးပါဝင်ပါတယ် ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ အထူးသဖြင့်
• Azathioprine (Imuran)
• Cyclosporine (Gengraf ၊ Sandimmune၊ Neoral)
• Mercaptopurine (Purinethol)
• ပိုးသတ်ဆေး ။ ampicillin (Principen၊ Omnipen) ၊ amoxicillin (Amoxil ၊ Augmentin ၊ Trimox ၊ Wymox)
• dicoumarol ၊ warfarin (Coumadin) ကဲ့သို့ သွေးကျဲဆေး
အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာတွေက Allopurinol နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ပါသလား။
Allopurinol က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်လိုကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေက Allopurinol နဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိမလဲ။
Allopurinol ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။ အထူးသဖြင့်
• ရိုးတွင်းခြင်ဆီ ပြဿနာများ
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေမှာ Allopurinol ကို သောက်သုံးရမယ့်အချိုးအစားက ဘယ်လောက်လဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးပမာဏများသည် လူကြီးသောက်သုံးရန် ပမာဏများဖြစ်ပါသည်။
ကနဦးဆေးပမာဏ ။ သောက်ဆေး 100 mg တစ်ရက်တစ်ကြိမ်။
ဆက်လက် သောက်သုံးရန် ဆေးပမာဏ ။ (မပြင်းထန်သော ဂေါက်ရောဂါ အတွက်) သောက်ဆေး 200 to 300 mg တစ်ရက်တစ်ကြိမ် (သို့) (အလယ်အလတ် မှ အပြင်းအထန် ဂေါက်ရောဂါအတွက်) တစ်ရက်ကို 400 to 600 mg ကို အကြိမ်ရေခွဲ၍ သောက်ရန် သွေးအတွင်း uric acid များခြင်းအတွက် (လူကြီးတွေမှာ အသုံးပြုရန်)
ကင်ဆာဆေးသွင်းကုသမှု အပြီး uric acid မြင့်တက်ခြင်းအတွက်
ကနဦးပမာဏ ။ Parenteral ။ 200 to 400 mg/m2/day အများဆုံးပမာဏ သည် 600 mg/day ဖြစ်သည်။
။ oral ။ 600 to 800 mg/day ၁-၃ ရက် ၊ အနည်းဆုံး တစ်ရက်ကို ရေ နှစ်လီတာ သောက်ရမည်။
ဆက်လက်သောက်သုံးရန် ။ သောက်ဆေး 200 to 300 mg/day ကို လူနာ uric acid ပမာဏ မြင့်တက်နိုင်ချေ အန္တရာယ် မရှိတော့သည်အထိ ပေးရန် ။
Calcium Oxalate Calculi with Hyperuricosuria အတွက်
ကနဦးပမာဏ ။ သောက်ဆေး 200 to 300 mg တစ်ရက်တစ်ကြိမ်
ဆက်လက်သောက်သုံးရန် ပမာဏ ။ 300 mg/day
Congestive heart failure နှလုံးရောဂါအတွက်
Study (n=11) superoxide free radicals ကာကွယ်ရန် နှင့် endothelial function ကောင်းမွန်စေရန် (in NYHA class II to III chronic heart failure) ။ သောက်ဆေး 300 mg နေ့စဉ် တစ်ရက်တစ်ကြိမ် တစ်လ။
Coronary Artery Bypass Graft Surgery ။ သောက်ဆေး 600 mg ကို ခွဲစိတ်ကုသမှု မတိုင်ခင် တစ်ရက်ကြိုသောက်ရန်။ ခွဲစိတ်ကုသမည့်နေ့တွင် နောက်ထပ် 600 mg သောက်သုံးရန်။
Study (n=31 – Cutaneous leishmaniasis: 20 mg/kg/day နှင့် low-dose meglumine antimoniate (30 mg/kg/day) ကို ရက် ၂၀ သောက်သုံးရန်။
Mania (bipolar I) နှင့်ဆက်စပ်နေသော Uric acid မြင့်တက်ခြင်းအတွက်။ သောက်ဆေး 300 mg နေ့စဉ် ။
High Risk Percutaneous Transluminal Angioplasty အတွက်
Study (n=38) – Primary Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty (PTCA) ။ သောက်ဆေး 400 mg အရေးပေါ် ဌာန သို့ ရောက်ပြီးပြီးချင်းသောက်ရမည်။ (ခန့်မှန်းခြေ reperfusion မတိုင်ခင် ၆၀ မိနစ်) ထို့နောက် primary PTCA လုပ်ဆောင်မှုပြီးဆုံးသွားသောအခါ တစ်ကြိမ်ပေးရန်။
Reactive Perforating Collangenosis အတွက်
100 mg သောက်ဆေး နေ့စဉ်။
ကလေးငယ်တွေမှာ Allopurinol ကို သောက်သုံးရမယ့်အချိုးအစားက ဘယ်လောက်လဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးပမာဏများသည် ကလေးများတွင် ပေးရမည့် ပမာဏဖြစ်သည်။
ကင်ဆာဆေးသွင်းကုသမှု အပြီး သွေးအတွင်း uric acid များခြင်းအတွက်
၁၀ နှစ်နှင့် အောက် ။ 200 mg/m2/day တစ်နေ့ နှစ်ကြိမ်မှ သုံးကြိမ် အညီအမျှ ခွဲသောက်ရန်။ သို့သော် 600 mg/24 hours ထက်ပိုမပေးရ။ 300 mg ထက်များသော ဆေးပမာဏတိုင်းကို အကြိမ်ရေခွဲတိုက်ရမည်။
၁၀ နှစ်အထက် ။ 200 to 400 mg/m2/day တစ်နေ့ နှစ်ကြိမ်မှ သုံးကြိမ် အညီအမျှ ခွဲသောက်ရန်။ 600 mg/24 hours ထက်ပိုမပေးရ။
၆ နှစ် အောက် ။ 150 mg/day သောက်ဆေး တစ်နေ့ သုံးကြိမ် ခွဲသောက်ရန်။
၆ နှစ် မှ ၁၀ နှစ် ။ 300 mg/day သောက်ဆေး တစ်နေ့ နှစ်ကြိမ် မှ သုံးကြိမ် ခွဲသောက်ရန် ။
၁၀ နှစ် အထက် ။ 600 to 800 mg/day တစ်နေ့ နှစ်ကြိမ် မှ သုံးကြိမ် အညီအမျှ ခွဲသောက်ရန်
၅ နှစ်အထက် ။ Study (n=31) – Cutaneous leishmaniasis ။ 20 mg/kg/day နှင့် meglumine antimoniate (30 mg/kg/day) ကို ရက် ၂၀ ပေးရန်။
Allopurinol ကို ဘယ်လိုပုံစံမျိုး အချိုးအစားမျိုးတွေနဲ့ရရှိနိုင်မလဲ။
Allopurinol ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဆေးပြား (သောက်ဆေး) ။ 100 mg ၊ 300 mg
Allopurinol ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဇူလိုင် 25, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဇူလိုင် 28, 2017
Allopurinol. http://www.webmd.com/drugs/2/drug-8610/allopurinol-oral/details. Accessed Aug 15,2016.
Allopurinol. https://www.drugs.com/allopurinol.html. Accessed Aug 15, 2016.
Allopurinol (Oral Route). http://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/allopurinol-oral-route/description/drg-20075476. Accessed Aug 15, 2016
ဗိုက်အောင့် စေတတ်တဲ့ အကြောင်းအရင်းပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင် ။ ။